Igo ESHOT Izu Izu ahia na B | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirIgo ESHOT Izu Izu ahia na Buses
24 / 01 / 2020 35 Izmir, Mpaghara Aegean, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
eshot na acho na mgbasa ozi maka ugbo ala
Izmir Metropolitan Municipal ESHOT General Directorate na-agwa ndị mmadụ ikike iji bọs, nkwụsị na mbufe mpaghara maka ebumnuche mgbasa ozi maka afọ ise. A ga-elele ndị dị ncha ahụ na webụsaịtị ESHOT.
ESHOT General Directorate na-arịọ maka ikike iji maka ụgbọ ala 4 puku 998 na-akwụsị na ụgbọ ala 900 maka afọ ise. A ga-eme ihe dị nro maka mgbasa ozi na Wednesde, February 5 na 14.30:XNUMX na ụlọ ọrụ isi.
Companylọ ọrụ ahụ, meriri nro ahụ, ga-ewepụta usoro ozi njem nke nwere ngụkọta ozi nke ihe ọnụnụ na vidiyo 1820 na etiti bọs, nkwụsị na ebe a na-ebufe.
Ọnụ ego e mere atụmatụ bụ ihe karịrị nde 48
Dika edemede 2886-a nke Steeti Nweta Prokpụrụ Mba 35, ọnụ ahịa atụmatụ nke ọnụ ahịa ka ejiri ya mechie ọnụ ịkwụ ụgwọ dịka 48 nde 274 puku 440 TL ewezuga VAT. Ego nkekọ nwa na-ekpebi ka 1 nde 448 puku 233 TL.
A ga-elele akwụkwọ a, nwere ozi gbasara etu esi etinye aka na mbido a, na enwere ike ilele ya na Ngalaba Na-ahụ Maka chazụ ESHOT General Director. Ndi ezigbo ma obu ndi oka iwu choro isonye n’onye choro inata akwukwo ESHOT nke akwadoro maka igha 2 TL.
Oge a ga-aga n’ihu February 5
Oge a ga-ekwenye maka inyefe onyinye a bụ Wenezde, Febụwarị 5 na 14.30:XNUMX. A ga-etinyerịrị atụmatụ ahụ maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntanetị ọrụ ESHOT General Directorate Nkwado Ọrụ ruo ụbọchị a.
Nwere ike ịlele na ịntanetị
Ndị dị nro, nke a nwekwara ike ilele na weebụsaịtị ESHOT, ga-eme na Wednesde, Febụwarị 5 na 14.30:XNUMX na Nzukọ Nzukọ ESHOT.
A ga-agbasa ozi niile banyere ESHOT
N'ikwekọ n'ụkpụrụ nghọta, ESHOT General Directorate kpebiri ibipụta akwụkwọ ikike niile dị ugbu a. N'ime mmemme ọmịiko ahụ ekwuputara na weebụsaịtị nke ESHOT, nkwanye ụgwọ ndị na-abịa ụbọchị na oge enwere ike ịgbasa ozi sitere na saịtị ahụ.
Ndị nwere nkwarụ n'oche oche
Enweghị mmasị na bọtịnụ mgbanaka iji zụọ Samsun Light Rail System
Nnukwu ngwa si Europe maka ụgbọ ala eletrik ụlọ
Igbe ojii na-abịa bọs
Karakutu Na-abata n'ọdụ ụgbọ mmiri
Ụgbọ njem ígwè maka ụgbọ ala na Bursa
Ọhụrụ Afọ Ntọala maka Tram na Bus na Kocaeli
Ngwa ngwa x-ray chọrọ ka esi na bọs
Na KBU, a na-ahapụ ndị na-egwu bọs na bọs ka ha banye n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ
Nnyocha nyocha oyi maka ụgbọ ala dị na Kocaeli
Iwu KPSS maka usesgbọ ala na Kocaeli
Ọ na-esiwanye ike ịnya ikike ịkwọ ụgbọala
TCDD e-tiketi na-emewanye mfe
TCDD na-eme atụmatụ ịzụta ụgbọ oloko isii ọzọ n'usoro Ankara-Konya YHT n'ọnwa a.